Leningrad esifundeni amumethe esikhumbuzo yezakhiwo yesikhathi esidlule: izinqaba, zimbozwe iveli yezimfihlakalo kanye nozungu, izindlu zikanokusho, benamandla umoya "izikhathi ekhazimulayo" ukuchuma kanye lasenza, sekukhohlakele, abayizintandane, izigodlo agugile. Kumele qhutshwa kude Petersburg kunoma yiluphi uhlobo 50-100 km, kanye namatshe ezikhumbuzo ngokubabazekayo - ofakazi izenzakalo ezinkulu esikhathini esidlule utshele "indaba ezahlukene" lapho impumelelo yomuntu siqu nosizi izinhlamvu abavelele eduze zithandelana ube nezikhathi ezinzima nezimnandi ube uMbuso enkulukazi.
Kodwa bambalwa abakwazi izinto zamagugu waseRussia kwamasiko ongamtshela kakhulu ngendlela wabona emanxiweni, ulahlekile zasendle isitshalo epaki villa-yesifundazwe Ropsha.
Isenzakalo esidume kunazo zonke "esigodlweni usizi"
izigodi eziningi Leningrad esifundeni igcwele-legends. Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, ifa lomndeni noma Blyumetrostov Demidovs - ngowokuqala cishe babulala isisekelo, kanti eyesibili - walondoloza cishe ngo ifomu yayo yasekuqaleni. Lapha, "ungakhuluma" itshe ngalinye. Abantu bendawo bathi sezulu kanzima eduze izigodlo wezwa amazwi ecacile, kwakukhona ngokoqobo nomaphi, nomculo ethulula ...
Kodwa Ropsha Palace - ikhaya yamakhosi, uMbusi wababusi nabakhulu sizungezwe izinganekwane kanye izinganekwane i ohluke ngokuphelele.
Ukuhleka nokuzilibazisa abantu kumnandi lapha ziyimimoya alien. Rumour has it ukuthi emigodini kufihlwe izinsalela ngodonga ezinkulungwane iziboshwa. Mhlawumbe luyinhlanganisela elimangalisayo insouciance Blissful elilodwa kanye nezinye sembubhiso ombangela energy ezimbi, akukho isikhathi ukudlala indima ebulalayo empilweni kubabusi.
Ropsha Palace: legend of Fedor Romodanovsky
Ropshinskoye ukuphakama manjalo yathatha fancy kuye ngokwakhe uPetru mina: spellbound ubambe ongezansi, wayaleza ukwakha indlu yamapulangwe encane, isonto kancane futhi epaki yabulala namachibi ezinhlanzi. Nokho, ngemva kweminyaka engu-4, la mazwe inkosi yayiwavumele umhlobo wakhe Fyodor Romodanovsky - kwaholela Preobrazhensky (analog we Imfihlo Office).
Umnikazi omusha Ropsha umhlaba wayaziwa njengomuntu ophansi ungumuntu olukhuni (ngalezo zinsuku iziphathimandla aphenya wadonsa "iqiniso elula" wabasolwa, hhayi ndawonye kuphela izintambo). Maduze, "lo mdlali yenkosi nezithakazelo isimo" waphenduka nesizotha Ubukhulu ku "Manor ekuhlukumezeni" - uhlobo legatsha amasevisi ekhethekile eziphuthumayo. Retellings zeminyaka labo isimo ukuthi amajele ne amawindi zareshochennymi atholiwe iseduze isakhiwo main ukuthi uyakhononda kandalnikov kwenanele amahlathi azungezile, kanye Romodanovsky, "uSathane," reveled e ukuhlupheka izisulu.
Namuhla, ngemva kweminyaka cishe 300 kusukela ekufeni Generalissimo wesahlulelo, izakhamizi ngendlela ebonisa ukukholelwa ezeni Ropsha namanje ukuzwa ukukhala zewayini isigamu-wangcwatshwa; yena uthandani ukuthi uma manual, kodwa sifana nebhere esesabekayo - nganekwane lithi, 'kwakuyizwe yena Olinda umnyango amahholo sokuhlushwa - ngezikhathi uyaphuma, sihlola izindawo okwakubulawelwa kuzo yezincithakalo, bese futhi yasebenza ngomshoshaphansi ...
Indima estate isiphetho Mihaila Golovkina
Obalulekile sesimanje Ropsha esigodlweni ubekade 1734. Umnikazi wesikhwama wahlabeka ke kakade umalokazana Romodanovsky - Mikhail Golovkin. umsebenzi olusemthethweni lakhula ngokushesha ukuze kwabonakala sengathi bakhona babengebona abantu abaqaphile labo iminyango, lapho uJehova kweminti neruwe, futhi lihambisana - the umeluleki futhi oluthandayo iNdlovukazi Anny Ioannovny, awuzange wamukelwe ngezandla ezifudumele.
Njengoba izenzakalo kamuva kwabonisa, udumo "esigodlweni baqalekisiweyo" akubanga yize. Ngo 1741, ngenxa impumelelo Uzungu, wanyukela sobukhosi Elizaveta Petrovna, futhi ukuphila Golovkin kwavela umugqa omnyama. Kubuyekeziwe monetchika iSigele uye waqaphela icala ngokukhwabanisa futhi wamgwebela ukufa. Nokho, ngomzuzu wokugcina umnikazi lwesigodlo ill-fated wakwazi ukubaleka isiphetho walengiswa - wayethethelela sidingiselwe eSiberia, futhi yonke impahla lathathwa isimo.
Architectural "echuma": isandla Rastrelli
Isigaba esilandelayo ushintsho we Ensemble yezakhiwo ifa kwaqondana neminyaka wokubusa Elizabeth. Yilowo umyalo wakhe Ropsha sigodlo sasibhekwa wabaphakamisa ngokuhambisana izitayela fashion kwenkathi. Futhi waqondisa komsebenzi noma omunye umuntu, kodwa Francesco Rastrelli - ehamba phambili wezakhiwo European futhi inkosi yayiqaphela of izikebhe wakhe. A uhlobo "trace Italian" in the umhlobiso sangaphandle esigodlweni kungenziwa ngokuthi amakholomu ye-oda laseKorinte, ukuthi ngisho namanje, ezinsukwini lokulibala ephelele kanye nesakhiwo ngokubabazekayo, qhubeka ngeqholo athwale isigqoko ophahleni-sokuvaleleka (kuvulandi classical).
Nokho, ngisho wayeyisazi Rastrelli sasingaphezu kwamandla amandla sixoshe ukupela okubi, liyachuma emahholo yegolide esigodlweni - eminyakeni embalwa kamuva iNdlovukazi wagula ekuguleni engaziwa, futhi ngaphambi kokufa kwakhe wanika Ropsha uPetru Fedorovich - indlalifa yesihlalo sobukhosi.
"Isigodlo-ungumbulali 'futhi uPetru III
Izinhloso ifa waseRussia kwamasiko esikhathini eside esadlulako ababevama izindawo sokugcina ngoba VIPs.
Lokho Ropshinskoye izindlu kanye nokudlula Elizabeth abayekanga ngezindleko zakhe siqu imiphefumulo zonakale - esinye isisulu "esigodlweni ezimbi" baba uPetru III, isipoki ukubuyisa lowo ngokusho amahemuhemu ethandwa, ngezinye izikhathi obonakala ezithombeni amanxiwa futhi ucela abedlula isikhafu buthaka uvalwe ifindo entanyeni yakhe ...
Ngokusho inguqulo olungekho emthethweni, lokubulala inkosi abasha - nomsebenzi wezandla Alekseya Orlova - othembekile uCatherine II; nguye kusolakala ukuthi wanklinya uPetru Fedorovich, ngoba ngalo generously klomela umvikeli wakhe. Phakathi kwezinye izipho pha aphakeme umuntu ukubala futhi Ropsha Palace. Nokho, Eagles babenedumela lover olukhulu ezweni lonke, ngakho ukuqeda ingcebo esikhathini esizayo esiseduze.
esigodlweni oyintandokazi Romanovs: Ropsha isiphetho
Lonke XIX Manor ekhulwini waphila ukuphila elinezinkathazo; nginguJehova ekhaya, kwenza izichibiyelo ezinqala ukuze izakhiwo izakhiwo, ipaki uye savela futhi ... wafa ezicukuthwaneni, kwadingeka ngandlela-thile ukwenzani ezithengiswayo elihluphayo. (Ngo-1801, ngemva nje ngesonto ukuthengwa esigodlweni, owabulawa Tsar uPawulu I.) Ungashintshi isiko sethusa futhi XX leminyaka ...
UMbusi uNicholas II - zinyanga ohlwini "izikhonzi zikaNkulunkulu" eyayinawo amaHholo balahlwe. Nakuba ukufa layifica ngoba emakhulwini amaningi amakhilomitha ukusuka Ropsha, esikalini zalesi sibhicongo waphinda waveza yokubakhona uxhumano okwesabisayo phakathi esigodlweni nezakhamuzi zawo: lonke Romanov umndeni, kangaka uyakuthanda ehlala izindlu, udutshulwe amaBolshevik ngo-1918. (Izazi zikholelwa ukuthi ukusebenzisa indawo sekubulaweni kwakhe kwakunguKayafase egumbini lendlu umthengisi Ipatiev -. Yomthengisi ovelele kusukela eYekaterinburg)
I ukonakala futhi lokulibala: uMoloki Revolution
Eminyakeni emva kwempi ifa Leningrad Region ziye zasetshenziswa ngetindlela letehlukene: endaweni eyodwa izibhedlela zenzeka obala langasese, nezinye iziphathimandla zaseSoviet awunika izidingo amapulazi collective; kwakukhona nalabo ababekhonza emafektri, zamasiko, nezakhiwo zokuqondisa.
Nge Ropshinskoye Isigodlo kanye eduze kwepaki umlando kuye kwafeza ihlaya elibi - ezweni laba impahla yabantwana izinhlanzi nursery-Union ukubaluleka. Bese - seMpi yoMhlaba yesiBili, ukubhujiswa, iphrofayela yokutakula kabusha okuqhutshwa ngayo izidingo impi, wokugoqa lokulibala ...
Izinsuku namuhla: amanxiwa sikhumbuleke futhi UNESCO
Ukubuyisela Ropshinskoye Palace - ngesihloko ukuthi ubuya ngokuphindaphindiwe emva 1991. nginikeze isimo "yizinto kwamaplanethi ukuziphilisa nakumasiko" at the isinyathelo izindlu UNESCO. Nokho, isimo esibi lesikhumbuzo njalo wayethukile futhi izikhulu, zimali abazimele.
Lapha futhi walindela: ubusika zigoqiwe kuvulandi columned - lowo zikhunjulwe bejabule wezakhiwo Rastrelli wizadi.
Ropsha izakhamuzi azithandi ukuba sibekezelele ukungabi nandaba iziphathimandla - kakade ugcwalise isicelo kubaPhathi Ibuthelelo uMongameli, kangangokuba akusekho, "phezulu", abathintekayo kohulumeni basekhaya. Futhi kubonakala sengathi ukusabela isalandelwa.
Ngokushesha ikhomishini esungulwe uye Kulinganiselwa isabelomali of kabusha esiphuthumayo into in ruble ayizigidi ezingu-15. Kodwa lemali adingekayo ukubuyiselwa ingqikithi esigodlweni, zezigidi - obuhlungu ukukhokhela sengqondo ukunakekelwa ukuze umlando isimo ...
Amagama zesifazane abathandwayo. amagama besifazane amahle namuhla
Yini okufanele ngiyenze uma mina ukhohlwe iphasiwedi kwi-iPad?
Ezezindlu - Yini leyo? Ezezindlu kanye nezinsizakalo zomphakathi. Ikhwalithi nendleko amasevisi izindlu